नारकिय जीवनबाट यसरी मिल्यो मुक्ति |
नारकिय जीवनबाट यसरी मिल्यो मुक्ति
प्रकाशित मिति :2016-06-06 14:21:10
काठमाडौं । माघ महिनाको ठिहिरो अनि झम झम पानी परिरहेको रात । मीरा (नाम परिवर्तन) का लागि औंसीको रात भएर आइदियो । एकातिर मेघ गर्जेको त्रास, अर्कोतिर चट्याङको आवाज । उनकी आमाको धेरैजसो वसाइ लेकमा हुन्थ्यो । उनी र हजुरवुवा बेसीमा । मीराले फटाफट भात पकाइन् र आफ्ना हजुरबालाई खुवाइन् । हजुरुबालाई खाना बनाउनु खुवाउनु उनको दैनिकी ।
त्यसै गरिन् उनले त्यस साँझ पनि । सदा झै मीराका ६२ वर्षे हजुरबा इन्द्र बहादुर सुत्न गए । उनी खाटमा सुत्थे । मीराले भुईँमा ओछ्यान लगाइन् । माघ महिनाको जाडो त्यसमाथि पनि पानी परेर चिसो बढ्दै थियो । रात छिप्पिँदै गएपछि मीरालाई हजुरबाले खाटमा सुत्न बोलाए । दस वर्षकी निर्दोष बालिका, हजुरबाले माया गरेर खाटमा सुत्न बोलाए भनेर उनी खुसी हुँदै गइन् । खाटमा पुगेपछि हजुरबाले उनलाई बेस्कन अंगालो हाले ।
हजुरबुबालाई नाङ्गै देखिपछि उनी डराइन् र भुईमा ओर्लन खोजिन्, तर राक्षस रुपधारी हजुरबाले उनलाई जवरजस्ती गर्न खोजे । ‘नाइ’ भनेर कराउँन खोज्दा मीराको मुखमा लुगा कोचिदिएर उनको अस्मिता लुटे । उनी जति चिच्याएपनि सुन्ने कोही थिएन । उनी रातभरि रगतको आहालमा डुविन् । बल्लबल्ल उज्यालो भयो । हजुरबाले के गरेको होला उनलाई थाहा थिएन । गारो हुँदै गयो । उनी विरामी भइन् । कहिले लेकबाट आमा आउलिन् र हजुरबाले आफूलाई के गरेको हो भनेर सोधुँला भनेर कुरिरहिन् ।
हजुरबा घरमा भनिस् भने घर खर्च दिन्न भन्दै उनलाई धम्क्याउँथ्यो र अस्मिता लुटिरहन्थ्यो । एक दिन उनले यो कुरा आमालाई भनिन् । आमाले उल्टै पागल भनेर मीरालाई कुटिन् र फेरी बेसीको घरमा हजुरबुबासँगै छोडिदिइन् । उनले आफ्नै आमाकोे सहयोग नपाएपछि राक्षसरुपी हजुरबाबाट पटक पटक बलात्कृत हुनुपर्‍यो । त्यतिखेर मीराका बुवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । दस वर्षको उमेरदेखि हजुरबाबाट अस्मिता लुटिएकी मीराका बाबु उनी १४ वर्षको हुँदा नेपाल फर्किए । ‘आमाले त उल्टै पागल भनिन् । बाबु देशविदेश बसेर बुझेर आउनु भएको छ कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेर बाबुलाई हजुरबाले गरेको कुरा सुनाउँछु भनेँ ।’ उनी तीतो अतीत सम्झिन्छिन् ।
एकदिन आमा नभएको दिन हजुरबाले आफ्नो अस्मिता लुटेको कुरा बुबालाई बताइन् । बाबुले मीराको कुरा सुन्दै सुनेनन् । पत्याएनन् पनि ।
उल्टै उसले पनि जवरजस्ती गर्न खोजे ‘मेरो बाले तँलाई बलात्कार गरेको हो कि होइन चेक गर्छु भनेर अंगालो हाल्यो । म भाग्न खोजेँ । भित्तामा लगेर टाउको ठोक्काइदियो ।’ उनी भन्छिन् ‘ बेस्कन कराएँ, रोएँ । घरमा कोही पनि थिएनन् । मुखमा पेन्टी कोच्याएर हातखुट्टा बाँधिदियो र मलाई हजुरबाले जस्तै गर्‍यो’ उनी भन्छिन् ।
उनले फेरि त्यो कुरा आमालाई भनिन् । आमाले फेरि पागल भनेर उल्टै कुटपिट गरिन् । उनलाई साथ दिने कोही भएनन् । फलस्वरुप उनी पटक पटक बलात्कृत भइरहिन् । ‘एसएलसी सकियो । फुर्सदको बेला घरमा बस्नुपर्ने भयो । बाले मलाई देख्नै नहुने दिनको तीन चारपटकसम्म बलात्कार गथ्र्यो’ मीराले भनिन् ।
उनको डाक्टर पढ्ने सोच थियो । एकदिन राक्षस रुपधारी बाबु प्रकाशलाई भनिन् ‘ड्याडी म विज्ञान पढ्छु ।’ आफ्नै छोरीको अस्मिता लुटेर रमाउँदै आएका प्रकाश बहादुरले भने सर्त राख्थे र भन्थे ‘मेरो इच्छा तँ पूरा गर । तेरो इच्छा म पूरा गर्छु ।’ हुँदा हुँदा पाँच रुपैयाँको पेन्सिल किन्न पनि बाबुको यौन प्यास मेटाउनुपथ्र्यो मीराले । कहिले खेत, कहिले मल खाल्टो, कहिले बनेपा, धुलिखेलका होटलमा पुग्नुपथ्र्यो । बाबुको बलात्कारको शिकार भएकी मीरालाई कसैले सहयोग गरेन । उनले जीवनदेखि हार खाइन् ।
आफ्नै बाबुको कान्छी श्रीमती भएर बाँच्न मन लागेन । उनले हजुरबा र बाबुको बलात्कारको पीडा डायरीको पानामा पोखिन् र व्यागमा राखेर घरबाट निस्किन् । बनेपा बजारमा पुगेर किरामार्ने औषधी किनिन् र धुलिखेलको डाँडामा गएर पिइन् । प्रहरीले उनलाई बेहोस अवस्थामा भेट्टाएर अस्पताल पुर्‍यायो । चार दिनपछि होस आउँदा डाक्टर र नर्सलाई देखिन् र सोचिन् ‘स्वर्ग भनेको यही होला ? स्वर्गमा पनि डाक्टर नर्स हुँदा रहेछन् भन्ने लाग्यो । तर त्यही राक्षसी बाआमालाई देखेपछि मरेको रहेनछु भन्ने लाग्यो । वरिपरि प्रहरी थिए । मेरो डायरी पढेरप्रहरीले सबै कुरा थाहा पाएछन् ।’
उनले डाक्टरलाई भनिन् मलाई किन बचाएको ? मलाई मारिदिनुस् ।‘ त्यहाँ पनि नर्स नभएको मौका छोपेर बाआमाले गाली गरे । उनी छट्पटाउँथिन् । टोलाउँथिन् । १२ औं दिन बाआमाले डिस्चार्ज गरेर घर लैजान खोजे, उनी जान मानिन् । अन्ततः डाक्टरले एकान्तमा लगेर सोधेपछि मीराले सबै कुरा बताइन् । डाक्टरले प्रतिवेदन तयार पारे । प्रहरीले उनलाई सहयोग गर्न संस्थामा खबर गर्‍यो । रक्षा नेपालका अध्यक्ष मेनुका थापा अस्पताल पुगिन् । प्रहरीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर मीरालाई रक्षा नेपालको जिम्मा लगाइदियो । उनी खुसी भएर आइन् । त्यही दिन सोधपुछको लागि भनेर हजुरबालाई प्रहरीले फोन गरेर बोलायो । कतुर्त खुल्ने डरले त्यही दिन हजुरबा इन्द्रबहादुरले आत्महत्या गरे । बाबु प्रकाश अहिले जेलमै छ ।
पलपल मरेर नयाँ जीवन पाएकी मीरा अहिले विज्ञान विषय लिएर कक्षा १२ पढिरहेकी छन् । सञ्चारकर्मी सुमन खरेलले उनलाई पढाउन सहयोग गरिरहेका छन् । डाक्टर पढाइदिने बचन पनि दिएका छन् । वर्तमानमा पनि विगतको घाउ बल्झिरहन्छ । आत्महत्या गर्न खाएको किरा मार्ने औषधीको असरले उनी अहिले पनि विरामी भइरहन्छिन् । उनी जव नागरिकता समाउँछिन् तव उनको आँखभरि आँसु छचल्किन थाल्छ । उनी भन्छिन् ‘बलात्कारी बाबु र हजुरबाबुको नाम नागरिकताबाट हटाइ पाउँ ।’ नागरिकताबाट बाबु र हजुर बाको नाम हटाउन रक्षा नेपालको सहयोगमा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकी छन् । रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापा भन्छिन् ‘नागरिकता समायो कि उनी अत्तालिन्छिन्, आफ्नो नागरिकता हेर्नै सक्दिनन्, जहाँ बा, हजुरबाको नाम लेख्नुपर्छ उनको हात काम्छ, लख्नै सक्दिनन् । हामी नै लेखिदिन्छौं । यस्ता बालबालिकाको अभिभावक राज्य हुनुपर्छ ।’